Kufamba neSteppy bhurukwa, tinokuratidza uyu muropa mutambo | IPhone nhau
Kekutanga nguva pandakaona mutambo uyu waive wekutenda kune mumwe wedu Luis, uye nekuparadza nguva, kubvira ipapo handina kumira kuedza uye kuyedza kurova rekodhi yangu, mune yakachena Flappy Bird maitiro, neyakareruka asi inoratidzika makanika. kutamba zviri nyore, chinhu chakaoma kuzadzisa chinangwa chedu. Ini ndinokukoka iwe kuti usangane neni neSteppy Pants, uyu mutambo unonakidza kubva kuApple App Store iyo yakaunganidza isingasviki mamirioni matatu kurodha pasi uye chiri kuve "nhanho nhanho" budiriro yatisingakwanise kupotsa. Uyu mutambo unonakidza uchachengetedza vashandisi veese mazera kuvaraidzwa.
Vagadziri vemutambo uyu havana kuda kupfuudza rondedzero yemutambo muApp Store, uye ngatitarisei, ndiyo kiyi yayo, kupusa + kunakidzwa = maawa ekuvaraidzwa.
Dzidza kufamba ... zvakare!
Steppy bhurukwa ndiyo yechokwadi yekufamba simulator iwe yauri kuzotamba gore rino!
Ramba wakadzikama kana uchisangana nezvipingamupinyi zvisingakundike sevatyairi vasina hanya uye iwe unofanirwa kukunda nyore kusinganzwisisike pakupinza rutsoka rwako mukumuka mumugwagwa.
Uchaseka. Uchachema Iwe unozoona kunakidzwa kwazvingaite kutora kufamba munzira.
Tave tichitamba uyu mutambo usingaperi kwemwedzi uye isu tichiri kuseka!
Uyu mutambo wakagadziridzwa nhasi nezvimwe zvinhu zvitsva zvinoita kuti zvinyanye kunakidza. Uye zvakare, inoshandurirwa mumitauro isingagumi uye inoenderana nechero mudziyo une iOS 8.0 kana kupfuura. Zvingave sei neimwe nzira, iwo mutambo wepasirese uye unoshandisa iyo "freemium" modhi, ndokuti, yakabatanidza kutenga. Isu tinogona kutogovana maGIF eedu "kufa" mumutambo.
Iwo ma mechanics ari nyore, nekukanda pachiratidziro isu tinofanirwa kufambisa yedu avatar gumbo negumbo (iro zvakare rinogadziriswa) uye nekudaro tichienderera tichifamba kudzivirira zvipingamupinyi zvakaita sekutsemuka, mota uye kunyangwe TNT!
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Kufamba neSteppy bhurukwa, tinokuratidza uyu mutambo unopindwa muropa